Nkwekọrịta Microsoft 10 kachasị elu na-achọ taa na 2018 | Ụlọ akwụkwọ ITS
Microsoft Asambodo na ngwa Taa: Ngwá ọrụ Microsoft Windows na-arụ ọrụ kachasị nke ọma na ụwa na ọtụtụ PC ndị na-agba OS ahụ, ọ kpaliri MS ịzụlite ụda ngwá ngwá ọrụ maka ndị sava, ọganihu ngwa ngwa na ọkwa ígwé ojii iji gbanwee ka ọ dị mkpa.
Site na ihe nchọta siri ike ma ọ bụ onye nchọpụta na-arụ ọrụ, iji mezuo nke ọ bụla n'ime ihe ndekọ Microsoft kachasị mma ma chọọ ya na 2018 ga-enye ha ọrụ dị oke mkpa iji nwee ọganihu ebe ọ bụ na otu n'ime usoro ọmụmụ ndị a ka a kọwara na OS nke òtù ahụ kere. Ị nwere ike ịchọpụta akwụkwọ ndị a ma chọpụta ihe kachasị mma maka atụmanya dị mma.
Ihe Microsoft Asambodo 10 kacha elu na-achọ
1. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Akụrụngwa ihe arụ:
Ebumnuche MCSE Server Ebumnuche ahụ bụ iji hụ na ọkachamara nwere ikike dị mkpa iji lekọta ma debe usoro ihe nkesa na-egbusi. Onye nke a ga-eji nlezianya mụọ ihe gbasara omume na njikwa usoro, njedebe aka, usoro nhazi usoro na nchịkọta data. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu, ị nwere ike ị nweta ọrụ dịka ọkachamara nkwado ma ọ bụ dịka onye nyocha data. Obu iwu imezu uzo ise di iche iche nke na-eburu n'uche ihe mgbaru ọsọ nke ime ka iru eru.
2. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Onye Nrụpụta Ihe
N'ime oge mgbe ngwa ọdịnala dịgasị iche iche, ịchọta akwụkwọ ikikere MCSD na-akwado nkwenye na njide nke aka bụ ọkachamara ngwa ngwa nke nwere ike ịme ngwa ngwa ngwa. Ha nwekwara ike ịmepụta ngwa weebụ, nchịkwa dị iche iche maka nkà mmụta sayensị ọhụrụ. Usoro ihe omume ahụ na-atụ anya ka ị gwụchaa akwụkwọ na Universal Windows Platform na Ntuziaka Mgbakwunye ngwa ngwa tupu ịchọọ ihe ndị ọzọ mepụtara.
Ihe dị iche iche nke usoro ihe omume ahụ dị mfe, akwụkwọ MCSA na-enyere onye ọkachamara aka ịza ajụjụ maka ịgbaso Windows Server 2016 na usoro ndị metụtara ya. Otu nwoke nke ga-emezigharị ihe ịga nke ọma ga-emesi obi ike na ha enwetawo nchịkwa nke njikwa nchekwa data, nchịkwa ihe nlekota oru na nlekọta. Nkọgharị 2016 na-eme ka ndị dị ugbu a nweta nkwado na echiche ndị dị ugbu a na mmemme mmemme nke emere na Windows Server. Ka oge na-aga, Microsoft nwere akụkụ dịgasị iche iche na-enye mgbatị ọzọ iji nọrọ oge dị mkpa n'ogologo izugbe gị. Ọ bụrụ na ị bu n'obi ikpuchi ha nile, ọ dị mkpa iji mee ihe niile metụtara Windows Server tinyere ihe mgbaru ọsọ nkpeazu nke ịchọta dịka onye ọkachamara na mpaghara gị.
4. Onye Nlereanya Microsoft Certified Solutions: Data Platform
Site na nyochacha nke MCSE na Data Platform, ị nwere ike ịgwa azụmahịa ndị nwere ike ị nwere ike iji nlezianya na-emeso nlekọta nchịkwa SQL ma na-elebanye anya na nhazi usoro nhazi nke bụ nke na-echere ndị ọzọ. Asambodo ahụ na-agwakwa òtù dị iche iche nke onye nkwuputa nkwupụta ahụ nwere ike ime nchịkwa data ma igwe ojii na ụlọ dị irè. Achịkọ nke ule ise dị iche iche kwesiri ka agwụchaa ma ị nwere ike tinye oge dị mkpa n'ogologo izugbe gị na SQL Server.
5. Microsoft MCSE: Ígwé ojii na Akụrụngwa
Microsoft nwere folda ịgba akwụkwọ gigantic na-ezube iji mee ka ndị mmadụ nweta ahụmịhe bara uru kpọmkwem mpaghara mpaghara mma. Ngwurugwu Cloud Platinum na Akụrụngwa na-eme ka o doo anya na ị nwere ike ịmepụta igwe ojii na-arụ ọrụ nke ọma na data na-elekwasị anya na Microsoft na-eji ọganihu dị iche iche eme ihe. MS Azure bụ ihe dị iche iche n'etiti usoro igwe ojii kachasị mma nke enyere ndị ahịa na site na inweta ọgbụgba ndụ ahụ, ị ​​nwere ike ime ka ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo mma ma mee ihe ha nwere.
6. Ụlọọrụ Microsoft System - Nchịkwa System Configuration Manager na Intune
Mgbe ị kwenyere ịnakwere Njikwa Nhazi System Center na Intune, usoro ahụ ga-enye ozi bara uru n'akụkụ dị iche iche nke isi ndokwa na usoro Microsoft Intune. Ọ na-agụnye ozi gbasara ụzọ kachasị mma isi na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nhazi usoro ihe omume, ịkwado ngwaahịa maka ngwá ọrụ abụọ, mmemme, na-elekọta ngwa na ịhazi data emepụtara na Intune. Asambodo ahụ na-ejikwa njigide, nchebe na nchepụta ma na-emepụta akụkọ.
7. Microsoft Exchange Server: Ịmepụta ma Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Ụyọkọ ụyọkọ nke ọmụmụ nke Microsoft na-enye bụ ọrụ mmụba bara uru nye ndị na-achọ akụkụ ọrụ. Mgbe ị mezuru ọgbụgba a dum, ị na - eme ka nzukọ gị dịkwuo mma site n'inwe ike ịmepụta Microsoft Exchange Server 2016 dị ka egosipụtara site na ihe ndị dị mkpa na izipu ya. Onye ochoro kwesiri inwe ihe omuma ihe kariri afo ato ka o na - aru ​​oru na sava Exchange ma mgbe ha mechara nke a, ha ga - enwe ike iduzi otu ndi isi na nkuzi nke achikota site na akwukwo ule di iche iche nke bu ihe omuma a.
8. Microsoft Office 365: Nabata na Ijikwa 365 Office
Office Microsoft nke na-eme ihe omume onwe ya aghọwo njikwa ejikọta ndị otu na Microsoft Office 365. Ndị ọkachamara IT nwere ike ịma ihe niile site na mmemme Office 365 tinyere ọnọdụ ya, ihe ndị dị mkpa na ndị mmadụ. Mgbe ha nwere ọtụtụ nkuzi na-akwado nkwado ma nwee ikike iji nyochaa ihe omume nke usoro ihe omume ahụ, ha nwere ike iji Powerpoint, Excel, Okwu rụọ ọrụ dị iche iche. Tụkwasị na nke a, ọ bụ usoro ihe dị mkpa ma bụrụ nke na-adịtụghị iche iche na ndị ọzọ SQL nkesa na Azure Cloud-based testaments nke ị nwere ike inweta site na ịchacha ihe dị mkpa.
Tupu ị nyochaa nyocha akwụkwọ Microsoft na ASP.Net, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala afọ ise nke itinye aka na ogbo ahụ. Na ohere na ị mepụtara ihe omume tinyere ASP.Net wee nwee ike bụrụ na di na nwunye nwere ogologo oge nke ahụmahụ na-ewere ihe gbara na MVC maka nhazi, ọ ga-abụ nke ukwu na-achọ ị nweta akwụkwọ ikikere MVC 5. Nkwupụta ahụ na-enye ozi gbasara ịmepụta, ịkwado, na ịmepụta onye ahịa ahụ na-etinye aka na nkà na ụzụ ngwaahịa. Dịka ọtụtụ mmemme mmemme ndị ọzọ, ịkwesịrị ịmepụta ihe niile nke akwụkwọ ule iji nweta ihe mgbaru ọsọ na-ezube iji ruo eruo ọkachamara banyere okwu a. Dị ka ọ na-achọ mgbasa ozi sara mbara banyere .Net, ASP.Net na MVC 5 n'otu oge ahụ, a na-eche na ọ bụ nsogbu dị elu ma nwee ezi uche maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-atụ anya inyere aka ọrụ ha.
Mgbe ị mejupụtara MCSA asambodo na SQL Server 2016, a ghọtara na ị ga-enwe ihe ọmụma pụrụ iche dị mkpa iji merie SQL database n'elu ígwé ojii na ebe obibi dị ka nzukọ na-atụ anya ka ha. Microsoft nwere dị ka oge ikpeazụ nke asambodo ahụ n'ime modulu dị iche iche aha ya bụ SQL 2016 nkwalite nchekwa data, Nchịkwa data na BI Development. Ndị ọkachamara na ikikere SQL nwere nhọrọ ọzọ iji nweta ụfọdụ ọkachamara n'otu mpaghara maka ụfọdụ ọrụ na mmepe ọrụ ma ọ bụ nwee ike ịnweta ule dịgasị iche iche ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịnagide nsogbu enweghị atụ.
Uru nke MCSE Asambodo Agụmakwụkwọ